Fiantohana hafa fiompiana BSF Maggot • Yurie BSF
Tsy hividy sakafo
Maggot dia sakafo hafa ho an'ny trondro sy ny sakafom-biby.
Manome toky ny fivarotan'ny biby fiompinareo.
Tsy misy enta-mavesatra amin'ny fividianana pellets
Toeram-ponenan'ny Modern BSF Maggot Ranch tsy misy fofona
Te hahalala ny toerana akaiky indrindra ao an-tanànanao?
Ahoana: Ny toerana fantatrao avy amin'ny rafitra dia aseho amin'ny laharan-tariby maromaro.
Tsindrio fotsiny ny fikarohana.
Raha te hahalala marina kokoa ianao, azafady mba andefaso ny karazana tsanganana tsy misy ny tanàna / tanàna izay misy anao ankehitriny.
Avy eo tsindrio ny SEARCH
Book Now, Antsoy ny Yurie BSF
Sarintany voarakitra ao anatin'ilay fandaharana dia tsy marina noho ny fetran'ny teknolojia farany.
Raha mila fanazavana momba ny fampiofanana, azafady mba mifandraisa amin'i Yurie BSF 0812-2105-2808
Vidim-bola vokatra mora
Ny famokarana milina mainty mivolombolamena dia mora sy sarobidy, afaka mampiasa fako, fako ary doro.
Ny voka-dratsin'ny sakafo mahavelona, ​​ny asidra amine sy ny proteinina avo dia manampy tokoa ny biby mahasalama manimba ny fivoaran'ny biby fiompy.
Tsy mamoaka fofona
FAMONJENA MAFY HO AN'NY SMELL, Ny tranonkala maimaimpoana dia azo antoka sy azo antoka. SAFE dia tsy amin'ny fihetsiketseham-pifaneraserana ary TSY MISY MAHATONGA an'ireo mpamboly.
Ny BSF Maggot tsy Bau Bau amin'izao fotoana izao dia mikendry ny hamokatra labozia ho an'ny trondro sy ny sakafom-biby.
Ny fambolena ny kôkôsy mahitsy dia tsy maintsy manitra, tsy misy milina, tsy misy zava-mahadomelina ary tsy misy fivalozana mba hahafahana manatsara ny vokatra.
Azo antoka, satria tsy nasehon'ny fianakaviany izany ary tsy afa-po tamin'ny fitondrana izany.
Tohizo ny fambolena kalsioma
Ny vokatra azo dia azo alaina ary ampiharina amin'ny pasteur maggot, mofomamy mofomamy sy vatosoa madinika na miaina (mena vaovao)
Amin'izany fomba izany no ahafahanao manana biby fiompy betsaka tsy hividy sakafo avy amin'ny magazay indray.
Velom-panafody ary mitahiry sakafo.
Tohizo ny fampiasana Maggot
Tsy mila misafotofoto momba ny fivarotana maggot ianao.
Satria hividy izany i Yurie BSF.
Tohizo ny Maggot Marketing
Yurie BSF dia nanome ny fanampian'ny namana / mpanohana an'i Rp100.000.000 ho an'ny fampandrosoana raharaham-barotra.
Ny vola fanampiana dia omena mba hampitomboana ny famokarana.
FAMETRAHANA MAHAIZA MANDRAKIZAY AO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO - TSY RIBA !!!
Tohizo ny fahafaha-manao asa aman-draharaha
TSY AZO AMINAREO ianao.
AMBASSADOR YURIE BSF dia vonona ny ho tonga ao amin'ny toeram-piompianao.
Ny AMBASSADOR Yurie BSF dia manatrika ny tanàna 100 mihoatra ny tanàna mba hanome tari-dalana azo tsapain-tanana mivantana amin'ny toeram-pambolena tsirairay.
Hamarino ny toerana 99
Amin'ny YURIE BSF UNIVERSITY dia omena fampiofanana.
Mba hiantohana ny fambolena BSF amin'izao fotoana izao tsy misy fofona mifanaraka amin'ny SOP (fomba fanao serivisy) amin'ny fambolena BSF tsy misy fofona.
Nitohy ny Yurie BSF University
Amin'ny maha-namana an'i Yurie BSF anao dia lasa mpikambana ao amin'ny KOPERASI MAGGOT INDONESIA ianao.
Ny fonosana ofisialy momba ny fividianana sy fivarotana maggot ary ny fampandrosoana ny orinasa hafa.
Ho tianao ny tombontsoa amin'ny fizarana ny vola sisa tavela amin'ny mpiara-miasa indostrialy indoneziana.
Tohizo ny Indostria Maggot Cooperative
Ampidiro ao amin'ny vondrom-piarahamonina Yurie BSF mba hampivelatra ny orinasa Maggot ao amin'ny tontolon'ny fambolena.
Ity dingana ity dia afaka mahafeno ny fangatahan'ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena.
Tohizo ny Agroindustry
Ity programa CSR ity dia natao ho an'ireo izay te hianatra, nefa tsy afaka mandoa onitra maoderina BSF tsy misy fofona
Tohizo ny CSR
Manomboha asa atao isan'andro miaraka amin'ny vavaka tsy maintsy atao mba hifaneraserana amin'Andriamanitra isan'andro.
Noho izany programan'ity Yurie BSF ity dia ny MAIN and NUMBER ONE amin'ny programa momba ny asa rehetra.
Tohizo ny vavaka
Tsidiho ny toerana misy ny Maggot Ranch 99
Nahoana no tia Yurie BSF ny mpihady?
Ny fianarana ny mamboly kôpity tsy misy fofona dia mora amin'ny programa iray efa nosedraina tamim-pahombiazana.
Ny tari-dalana nomena dia tena nahomby teo amin'ny fahombiazako, anisan'izany ny fametrahana ny vokatra vokarin'ny orinasa madinika
Ny faharetan'i Mbak Yurie hitarika ahy dia tsy fahita firy, be atao any amin'ny birao dia tsy olana satria manam-paharetana ny mpanara-maso
Tsidiho ny toerana misy ny Maggot tsy misy fanorenana
Jereo ny toerana
STOP ny fandaniana vola mba hividianana pellets, 99% ny tantsaha sokatra sy ny hafa ivelan'ny orinasa satria tsy mahavita manangona sakafo be dia be amin'ny 60-70%, raha toa ianao ka manomboka ny famokarana, indrindra ny sakafo dia afaka hahatratra ny 80%.
Mahafinaritra ny tahirin-tsakafo ho an'ny sakafom-biby ho an'ny 82%. Manao izany ianao amin'ny famokarana ny sakafom-bozakao miaraka amin'ny fitahirizana maggot, toy ny lafarinina maggot mba hahatonga ny fitomboan'ny zavamaniry ho betsaka. Fotoana izao hamonjena ny vola ary hifantoka amin'ny fitomboan'ny isan'ny biby fiompinao
Mijere fotsiny amin'ny horonan-tsarimihetsika video ho an'ny fambolena BSF tsy misy fofona.
Ahoana ny fandefasana ny fampiharana ny Yurie BSF ao amin'ny Playstore.
Tohizo ny fomba hanamboarana Maggot
Download ny fomba fiasa
Maggot ho an'ny Fitaovam-biby
Mba hahazoana ny vokatra faran'izay bitika amin'ny tsiranoka BSF, alohan'ny hanomezana ny trondro sy ny sakafom-biby, dia manolotra anao amin'ny voalohany:
Mangatsiaka mivantana / mivelona
Ahoana no fomba handaminana ny Maggot ho an'ny sakafo
Fomba fanao hianarana mba hikolokolo bobongolo tsy misy pentina.
Mahamenatra ny manontany
Miverena eny an-dalana
Ny iray amin'ireo sakana amin'ny fahombiazana dia ny henatra amin'ny fangatahana, Yurie BSF dia manolotra tolotra kanto manokana, hamaliana zavatra momba ny business maggot sy teknika teknika ho an'ny maggot.
Miantsoa koa izao
Mahafantatra lalitra daholo ny olon-drehetra. Ireo bibikely ireo dia manodidina antsika. Tonga izy ireo satria manofoka loharano fofona sakafo. Ankoatr'ireny lalitra mampikorontana ireny, dia mitondra aretina aretina toy ny tuberculosis (tuberculosis), dysenteryamuba, kôlerà ary aretina isan-karazany hafa koa izy ireo.
Ny fielezan'io aretina io amin'ny alàlan'ny sakafo novonoin'ny olona taorian'ny nanjo ny lalitra. Saingy ny tondra-drano dia mitondra soa maro ho an'ny olombelona.
Ny sifotra dia karazam-bibikely (baoritra diptera radarrapha subordre), manana antenne fohy ny moronolojia, manana elatra roa miavona ny seapangany voalohany ary misy elatra kely izay mikarakara handanjalanja rehefa manidina.
Mpiompy aretina mikarenjy
Nahoana ny lalitra no antsoina hoe bibikely manaparitaka? Satria rehefa mijanona ao amin'ny toerana maloto ny lalitra, avy eo amin'ny 125.000, dia hijanona ny toerana hipetrahany.
Mitranga izany noho ny fomba miavaka amin'ny fihinana lalitra. Rehefa mipetraka amin'ny sakafo izy ireo, alohan'ny hanombohan'ny misakafo, dia hamoaka ranon-javatra avy amin'ny vavany.
Ny fluid dia miasa toy ny anzima izay manampy amin'ny fanamainana ny fihinanana sakafo. Io ranon-tsakafony io dia tavela amin'ny sakafo ary raha misy olona voan'ny aretina isan-karazany.
Zava-dehibe momba ny lalitra
Ny lalitra dia tonga ao an-trano satria manofa trano izy ireo. Manaisotra sakafo ao anaty boaty iray izay tsy afaka mipetraka ny lalitra.
Ny fikarakarana sakafo dia mavitrika mandritra ny andro. Ny fiaramanidina miankina amin'ny karazany dia mety mamokatra eo anelanelan'ny 75-126 atody sy ny loaka ao anatin'ny 1-4 andro.
Amin'ny lafiny ara-biôlôjika, ny minitra 5 dia handoto ny biôlôjia, ary raha mihinana amin'ny olona, ​​dia miteraka ny aretim-pivalanana sy ny sisa.
Ny fihodinan'ny fiainana an-davan'andro dia miova, eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 30 andro. Ny BSF dia miaina ao anatin'ny 5-8 andro vitsy mialohan'ny handehanan'ireo lalitra maitso tonga any 30 isan'andro.
Ny lalitra dia afaka manidina amin'ny haavo manodidina ny XNXX km isan'ora, izany no mahatonga ny fako na ny sakafo izay natsipotsika fotsiny dia hidina haingana.
Indrindra ao anatin'ny tontolo izay nanangonan'ny zana-kisoa ny lonaka.
Tombana ho an'ny lalitra ho an'ny olombelona
Ny ampiasana azy amin'ny lalitra dia ny taranany, izay matetika no antsoina hoe lavenona na maggot na magot na gape na maggot na harefo na uget-uget sy ny sisa.
Any amin'ny tany sasany, ny lalitra dia amidy ho an'ny olona. Manome sehatra manokana tahaka ny pasta, sira ary pizza.
Ao amin'ny tontolon'ny fitsaboana, ny lalan-jazakely, ny alika na ny lavenona na ny maggot na ny uget-uget, dia ampiasaina ho fitaovana fitsaboana ho an'ny aretina avy any ivelany izay matetika antsoina hoe "fitsaboana maggot".
Aiza no misy ny lavenona eo amin'ny ratra mba hihinana ny hoditra sy ny nofo amin'ny ratra mahafaty izay voan'ny aretina, mamono bakteria ary mihinana hoditra maty. Ataovy mora kokoa amin'ny fanafody ny fery.
Ny Magot dia matetika ampiasain'ireo polisy mba hamantatra ny taonan'ny faty amin'ny tranga isan-karazany.
Tombontsoa iray hafa ny hoe ny votoatin'ny refilin dia matetika ampiasain'ny orinasa toy ny adhesives. Ny herin'ny adhesive sy ny elasticité dia mahery kokoa noho ny an'ny gypsy tree sip.
Ny gana refiline dia afaka mitondra ny aretina isan-karazany ao amin'ny ati-drà sy ny meina. Raha matetika dia manakana ny fiparitahan'ny ra sy oksizenina ao amin'ny atidoha ny hafanana roa.
Ankoatr'ireo kankana sy bakteria, ny maggots dia misy koa ny oragnik, ny fako ao an-trano, ny fako ao amin'ny orinasa, ny fanariam-pako, ny diky biby, ny faty ary ny fitaovana organika hafa.
Tombontsoa iray hafa izay raisin'ny olona maro any Indonezia dia manitsy ireo lavanila ireo ho sakafo ara-boajanahary sy loharano hafa ho an'ny trondro sy ny sakafom-biby.
Amin'ny ankapobeny, ny maggot dia alaina amina alika madinika, alikaola, kobam-bary, alika maitso, tsiranoka maivana, kiriodana maina, kofehy maggot, alika maitso, alika maina sy ny sisa.
Ireo fanangonana maitso dia omena mivantana ny biby fiompy na voatahiry ho fitaovana ho an'ny trondro, ho an'ny biby fiompy sy ny biby mandady.
Ny fampiasana kankana ho an'ny sakafo voajanahary ary ny safidy hafa satria ny maggot dia manankarena ny ronono, asidra amine tanteraka ary avo ny proteinina. Ny proteinina dia mirakitra ny 40-56%.
Ny endriky ny lalitra samihafa. Ny sasany dia kely, matavy, be sy kely ary miankina amin'ny karazany.
Amin'ny ankapobeny dia manana fahaiza-manao tsara izy ireo mba hampifanaraka ny fihetsikan'ny rivotra.
Ny lohan'ny lalitra dia misy maso mifangaro be mibaribary eo amin'ny andaniny sy ny ankavanana amin'ny loha, antennae, ocelli, vava. Ny maso dia afaka miara-miasa amin'ny loha.
Ny tondra-drano dia manana neurons izay mahatsikaritra ny hetsika ary koa toy ny fitaovana hifehy ny fomba fijerin'ny hetsika manodidina.
Mba hahatonga azy ireo hibanjina fihetsiketsehana manidina, mivadika ary mihodinkodina mba hamantarana ny endriky ny zavatra.Tsy misy amin'ireo karazan-tsavily manana nify.
Ny siramamy no vinaingitra (pollen) ary sakafo mahavelona. Tsy hohanina ny sakafo matsiro.
Misy karazam-borona maromaro misy tabanidae anefa misy antsy ao am-bavany mba hanampiana ny hazo fijaliana sy hanosotra ny rany.
Ny andraikitra dia ny mihazona ny elatra ary manana hozatra amin'ny sidina amin'ny fizarana faharoa Ny fizarana iray sy telo dia kely kokoa. Ao amin'ny segondra fahatelo, ny vavazo dia manana hadisoana ho toy ny tsy fitoviana rehefa manidina.
Reproduction of the fly
Rehefa mifaninana na mitambatra ny toerana misy azy ireo dia mitodika amin'ny lalana iray ihany, ary ny toeran'ny tovolahy dia ambonin'ny vatany.
Tsy ela taorian'izay dia nihemotra indray ny toerana misy ilay mpivady. Ny ray aman-dreny mitaiza bevohoka dia hitady toerana eo akaikin'io sakafo io mba hametrahana ny atody.
Ankoatra ny karazan'ny fiaramanidina BSF (Hermetia illucien) izay mametraka ny atodin'ny atody tsy ambonin'ny sakafo, fa manodidina ny loharanon-tsakafo.
Ny toerana izay tadiavina amin'ny ankapobeny dia manana loharanon-tsakafo maro be toy ny sakafo semala ho lava.
Ny atidohan'ny vorona dia hikorontana mandritra ny ora maromaro ary tsy mitovy amin'ny lalitra BSF izay mitaky andro 2-4 mandra-pahavaky ny atody.
Fiompiana trondro (karazana drosophila)
Horse Flies (fianakaviana tabanidae)
Ny lalitra mifototra ao an-trano (musca domestica)
Ny tsimok'aretina dia bibilava ho an'ny tantsaha satria manidina vokatra izy ireo. Mahavariana tokoa ity fiaramanidina ity satria betsaka loatra ny sakafo any amin'ny toeram-pambolena ary manohana ny toetr'andro indoneziana ho azy ireo.
Tamin'ny fotoan'ny orana, dia nitombo be ny lalitra.
Ireo toetra mampiavaka ny Lalitra Fruit
3 mm ny halavan'ny pilotra
Ny lokon'ny vatana dia mavo-mavo na dappled
Misy maso mena mena
Manana vavon-doha mihantona rehefa misidina tsikelikely
Ny atody dia endrika tahaka ny volana midadasika
Ny atody dia napetraka ao anaty vatana na eo amin'ny hoditra na amin'ny ratra malemy na voankazo
Ny isan'ny atody dia mikasika ny 15 amin'ny voa
Ny atodin'ny atody aorian'ny roa andro
5 mm loko pupa
Ny kibo dia manana tsipika 3
Vao haingana ny fiaramanidina vavy
Ny vavony lahy dia mihodina kokoa
Ny androm-piainana dia maharitra ny andro 16.
Bibikely mivelona eo anelanelan'ny 6-9 andro
7-30 andro lava
Adult dia mivelona mandritra ny herinandro 2-9
Io fiaramanidina io dia samy hafa ary miavaka amin'ny hafa. Ny lalitra vy dia ovoviviparous, izany no ataony amin'ny ratra, ny loto, ny faty, ny famoahana ny zavamanana organika, sns. Ny atody dia tsy atody.
Ny toetra mampiavaka ny sifotra
Ny masom-behivavy dia larvivara
Ny halavin'ny soavaly 6-14 mm
Manana latabatra maivana matevina
Manana tsipika mainty 3 manitatra mankany amin'ny tendron'ny dorsal
Manana kiraro maitso matevina
Sakafo Fly Fly
14-30 andro manidina
Isaky ny mamoaka voalohany ny 40-80 larvae ny fametrahana voalohany
Misy karazana lalitra maitso, ankapobeny sy lehibe. Misy kibon-doko miloko, volon'ondry manga, maitso ary maitso.
Miankavia amin'ny karazana trondro na hena mena na biby maty na fandaniana sakafo fako.
Ny tavy maitso dia manana fahaiza-manao mahatalanjona, mila iray segondra izy ireo mba hametraka bakteria sy mikraoba ao anaty sakafo ananany.
Ireo toetra mampiavaka ny lalitra maitso
Fihetseham-po maitso manidina 1 / 4 "-1 / 12" inch
Vovobony miloko volomparasy, volomparasy somary mavo, maitso sy maitso
3 / 4 lehibe lehibe lava lava
7-12 andro lava
Ny vorona maitso dia manala ny 8-18 ora
Miaina amin'ny hena mivaingana na trondro azo avy amin'ny trondro, na diky biby, na fako sakafo. Ny tsy fisakanana tsy mitabataba dia miteraka lalan-kely izay mahatonga ny fihenan-tsakafon'ny biby. Tena maharary ny moka.
Ireo toetra mampiavaka ny soavaly
Ny halavan'ny soavaly lehibe iray dia 25mm
Mena na mainty ny masony
Ny mason'ny taovan'olona dia mifanila
Ny mason'ny fiaramanidina vavy dia lavitra lavitra
Horse Fly Cycle
Raha vao misy atody toy ny 100-1.000 zavatra
Hianjera eo anelanelan'ny 5-7 andro ny vorona mpitaingina soavaly
Ny androm-piainan'ny soavaly olon-dehibe dia eo anelanelan'ny 30-60 andro
Fandefasana fako na fanodinana volom-borona na lalitra lalitra. Ny loko dia tia fako fambolena toy ny fotaka.
Ireo toetra mampiavaka ny Lalamby
2 mm Fly Lany
Kofehy feno volo
Ny atody dia hihodina 1-6 isan'andro
10-50 andro lava
1-3 andro fetin'ny pupa
Misy karazana sambo sand roa:
Mampidi-doza ity ondry ity satria mangeja ny biby sy ny olona izay afaka miteraka fihenanana sy aretina isan-karazany. Toy ny tazo mahery.
Ny toeram-ponenany manodidina ny morontsiraka, ala honko, ala ary toeram-piompiana ombidia. Io karazam-borona io dia miasa amin'ny alina eo anelanelan'ny 9-4 maraina.
Mitefoka ny sandan'ny sand
Phlebotomus (leishmania vector vice)
Lutzomiya (leishmania vector vecteur)
Ireo toetra mampiavaka ny lalitra Sand
Voafehy ny vatany
Mavokely mavo sy mavokely
Manana mason'ny mason'ny mainty
Manana tongony lava malefaka
Rehefa mangina na miala ny elany dia misokatra foana
Ny vatany sy ny elany dia rakotra hoditra tsara
Fiaramanidina avo dia avo hatramin'ny dimy metatra
Mba hamokarana atody, dia mila ra avy amin'ny rambony sy ny rambony ny lalitra
Indray mandeha ny lay eo anelanelan'ny 30-50 atody mainty
Ny lalitra adult dia 10-11mm amin'ny halavany
Mavokely mena manja mena.
Sand Fly Life
Miaina hatramin'ny 2 taona
Pupa na cocoon ho an'ny 1-2 herinandro
Ny karazam-borona aty an-tokantrano dia ny lalitra izay mahazatra indrindra amintsika ary ireo voan'ny aretina. Matetika ny tokantrano vavy dia mandeha indray mandeha.
Mametraka atody manodidina ny atody 100 izy ireo amin'ny famotehana ireo fitaovana ara-organika toy ny fako, fatin-koditra na fefy.
Ireo toetra mampiavaka ny Tranon'ny Trano
Ny halavin'ny lalam-ponenan'ny olon-dehibe dia eo anelanelan'ny 5-8 mm
Manana andalana 4
Manana tonon-kiraro mainty
Manana kavina mavo
Ny endriny dia rakotra volo tsara izay nanandrana nanandrana ny taova
Manana maso be pitsiny
Ny masony dia manana lanja an'arivony izay mamela malalaka fahitana
Ny fihodinan'ny elatra efatra dia lasa mihodina nefa tsy mahitsy (mihodina)
Ny fotony dia fotsy
Ny endrik'ilay vatana dia mihodina amin'ny tendron'ny loha
Manana rivotra fanolorana 2
Tsy lavaka ilay lavaka
Ny haben'ny tsimok'aretina dia mahatratra 12 mm ho olon-dehibe
Ny fiaramanidina BSF na miaramila mainty na fiaramanidina mirefotra dia manana vatana izay eo anelanelan'ny 15-16 mm sy mainty.
Miaramila mainty mivezivezy any amin'ny toera-maherin'ny tropika sy manify no afaka mamerina tsara. Ny fisiany eo amin'ny tontolo iainana izay mitombo be ny zavamaniry maniry, izay mihinanan'izy ireo amin'ny alalan'ny fantsona ny maha-tantely ny tantely voninkazo na ny ando maraina.
Tsy hita ao amin'ny trano fonenana satria tsy mihinana ireo lalitra ireo. Misy zavatra maro hita any amin'ny toerana izay ahitana fako betsaka, fako sy vovoka mba hametrahana ny atody. Amin'ny fotoana iray dia misy olon-dehibe vavy mametraka atody 185 - 1.235 atody.
Karazan-trondro: Hermetia illucens
Anarana nomerika: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)
Hermetia nify Bigot, 1879
Hermetia malaza Copello, 1926
Famaritana momba ny lalitra BSF
Ny volon'ny BSF lehibe dia manodidina ny 16 mm (5 / 8 santimetatra). Ity volo midadasika ity dia manana vatana izay mainty maina.
Miaraka amin'ny loko manomboka amin'ny mainty hoditra, manga sy maitso maitso eo amin'ny tratra ary indraindray miaraka amin'ny tendron'ny mena. Ny faritra tergite faharoa (kibo) dia misy faritra mazava tsara.
Miaraka amin'ny endriky ny lohany sy ny masony lehibe. Manana antra iray izay indroa ny halavan'ny loha. Manana tongotra mainty 6 miaraka amin'ny tarsi whitish.
Ny elatra BSF dia endrika toy ny menaka. Ary amin'ny fialan-tsasatra dia mihodina eny an-davan'andro ny elatra eo amin'ny vavony. Ny fiaramanidina Mpiady Black dia fihodinana mimic.
Mitovy amin'ny BSF Wasps
Rehefa nijery ny halavany, ny lokony, ary ny bika aman'endrina mitovy amin'ny isps sy ny toy izany. Indrindra indrindra fa ny antilangan'ny angidina dia mihalava tahaka ny toho.
Tarsi miverimberina amin'ny lalitra malefaka ary misy "varavarankely" kely roa mangarahara ao amin'ny sehatry ny abdominal fototra.
Inona no mahatonga ny lalitra ho toa manana "lavenona lava". Ny lobolobo maintitra mainty dia tsy mitovy amin'ny trano sy ny lalitra maitso.
Tombontsoa ho an'ny miaramila mpiady
Ny tombony amin'ny ankamaroan'ny vokatra avy amin'ny milomano miaramila dia ny zanany na ny lavenona na ny maggot na ny uget uget na ny maggots.
Izay taty aoriana dia noraisin'ny mpitsabo, ny polisy, ny trano fisakafoanana, ny reptile ary ny indostria mpamboly fambolena fambolena araka ny faritra misy azy.
Ny vokatry ny 22 an'ny namana namana BSF
1. Azo antoka ho an'ny Olombelona
Ny Black Soldier Fly dia tsy mampidi-doza sy tsy mampidi-doza ho an'ny olombelona. Ny BSF tsy manimba dia manidina toy ny lalitra sy lalitra maitso.
Manana vava ny adult BSF saingy azo ampiasaina ihany ny misotro satria tsy aretina avy amin'ny olombelona izany. Ny BSF lalitra dia tsy manaikitra na manindrona izay mahatonga azy ho voaro amin'ny olombelona.
Nandritra ny androm-piainany dia tsy nihinan-kanina ny BSF, nisotro ny ranomamy sy ny andoha maraina ry zareo.
Izany no mahatonga ny BSF ho an'ny olombelona. Ary izany no mahatonga anay tsy maharaka ny BSF ao an-trano.
Ny BSF dia tsy manala aretina
Ny lalitra miditra sy miditra ao an-trano dia lalitra maitso sy tranom-biby mampidi-doza satria mitady karazan-tsakafo izy ireo ary manaparitaka ny aretina.
Tsy hita ao amin'ny sokajin'ny bibikely na vetika ny lavanila adult sy ny BSF. Mifanohitra amin'izany, ny milisy mainty mitam-basy dia milalao toy ny kankana mena.
Tahaka ny fihoaram-pako amin'ny fako, fako sy dongona izay afaka mamotika zavatra manitra ary mamerina ny sakafo ho an'ny tany.
BSF Larvae dia loharanom-pahavelomana voaaro
Ny Black soldier fly larva (BSF) dia loharanon'ny proteinina maharitra (azo havaozina) izay tena tsara ho an'ny kolontsaina aqua, sakafo ho an'ny biby, biby ary sakafo ara-pahasalamana.
Larvae dia manana fironana goavambe izay afaka mandany indroa ny lanjan'ny substrate amin'ny andro iray.
Azo ampiasaina koa ny Larvae mba hanangona ronono ao an-trano, toeram-ponenana fako, fivarotana trano fisakafoanana an-tsokosoko.
Anisan'izany ny legioma sy ny voankazo, ny vokatra azo avy amin'ny fambolena sy ny fanariam-pako, anisan'izany ny fako sy ny fako.
2. "Tsy mahafa-po" ny vavan'ny BSF
Tsy toy ny tranom-biby ny BSF dia manana ampahany "tsy tonga lafatra" amin'ny vava izay tsy mihinana ary tsy afaka afa-misotro ranon-javatra toy ny ranom-boankazo na ny ranon'ando.
Satria tsy mihinana BSF dia tsy manipy ny sakafo miaraka amin'ny biby enzymes ho an'ny areti-mifindra, toy ny lalitra hafa, ka tsy manely aretina izany.
Ny Black fly miaramila dia tsy liana amin'ny fidirany any an-trano na sakafo hafa. Toy ny mpiloka sy ny coprovores, ny lalitra lalitra mitondra atody dia liana kokoa amin'ny famotehana sakafo na entona.
Ny fiaramanidina Black soldier dia tsy manidina toy ny lalitra hafa. Ny fiaramanidina mainty hoditra dia tsy dia manana hery firy noho ny fahaizany voafetra hanina sakafo ho olon-dehibe.
Ny fiaramanidina mainty hoditra dia mora tratra ary mihetsika rehefa miditra ao an-trano, satria tsy misoroka rehefa tratra.
Miaramila mainty manidina milina fanadiovana (madio) ary tsy manaikitra na manindrona. Ny hany fitaovam-piadiana manohitra ireo mpihaza dia ny manidina sy miafina.
Ny fampihenana ny miaramila mainty miondrika dia azo atao amin'ny fanesorana ny pupa alohan'ny hidirana ao anaty lalitra.
Fomba iray hafa koa ny manalefaka, maina, manangona biby fiompy, manangona tahiry fanangonana ao anaty kitron-tsakafo mba hamokarana automatique, na hanome vorona vorona.
4. Sakti BSF manidina
Ny feo tarihin'ny BSF dia afaka manala ny karazana lalitra hafa koa. Ary raha misy lalitra sy bsf maggot ao amin'ny faritra iray dia tsy hisy lalitra sy tsiranoka hafa izay sahy hitifitra.
5. Organic Dextroration Organic
Amin'ny andro iray, ny magy BSF dia mety handany roa heny noho ny fako voajanahary, ny fako na ny fako.
Midika izany fa raha manana 100 kg bsf magot isika, dia hihazakazaka isan'andro ny 200 Kg. Ny fako alaina dia azo alaina avokoa ny fako, ny fako, ny diky biby ary ny fanariam-pako.
Ohatra momba ny fako alikaola
Tratra maitso (legioma sy voankazo)
Fako trano fisakafoanana
Ohatra momba ny fanodinan'ny Maggot
Fonon'ny menaka palmie
Kitapo menaka Palm
Ohatra momba ny fanosihosena biby
Mpihinana biby fiompy
6. Manaova tsy fofona
Toy ny dihin'ny omby amin'ny ankapobeny dia miteraka fofona. Tsy toy ny vovoka entin'ny bsf maggot dia tsy miteraka alahelo.
Ny fanotron-jazakely dia vatosokay kely toy ny fasika na ny haben'ny tandroka maggot.
7. Afaka miaina any PH Extrem
Fantatra fa tena mafy loha ny larva BSf ary manana fahaizana miaina ao amin'ny PH. Toy ny adiny roa sy efatra amin'ny alikaola, sira, asidra ary amoniaka.
Ao anatin'ny hafanana mangatsiaka na raha tsy misy sakafo dia hipoitra ny alika BSF, mitsangàna ary mitsangàna ary hiverina rehefa miverina amin'ny fahamendrehana ny hafanan'ny rivotra.
8. Harina amin'ny sakafo sy proteinina ambony
Ny BSF Magical dia manana proteinina 40-56%, proteinina 30-36% ether, 15-16% ash, 4.9-5.2% calcium, ary 0.61-0.64% phosphorus amin'ny endrika maina.
Ny larva BSf dia manankarena amin'ny sakafo, mameno ny votoaty amina amino ary ambony amin'ny proteinina ka tena tsara tokoa ny manome ho an'ny biby.
Ohatra amin'ny biby fiompy biby fiompy
Ny trondro rehetra
Ny karazana akoho rehetra
Ny karazam-borona rehetra
Karazana entana rehetra
Ary dia toy izany hatrany
9. Voajanahary natoraly BSF
Ny taona ho an'ny BSF dia manodidina 5-8 isan'andro ary mety hahatratra 14 isan'andro. Mandritra ny vanim-potoana iainan'ny lalitra amin'izao fotoana izao dia mipoitra amin'ny alalan'ny fifanatrehana na fifanarahana izy ireo.
Rehefa maty na manambady lehilahy miaramila mainty dia manidina mandritra ny ora maromaro dia ho faty izy. Raha miala sasatra kosa ny miaramila mainty hoditra aorian'ny filalaovany ny atodiny.
10. Tena haingana ny fitomboana
Amin'ny fanomezana sakafo amin'ny endrika fako, kohaka na fako, ireo lavaka kely izay vao mainka miezaka ny manatratra ny adin'ny zokiny manodidina ny 18 isan'andro.
Mandritra izany fotoana izany amin'ny herinandro faharoa dia mihabetsaka ny haben'ny lozam-pifamoivoizana ary mitombo ny haben'ny 15.000.
Io fitomboana haingam-pandeha mavesa-danja io dia mitondra tombontsoa ho an'ireo mpamboly maggot, izay azo alaina sy omena ny biby fiompy mandritra ny tapa-bolana.
Mpamboly maro no manome ny heriny mandritra ny tapa-bolana, satria tsy mafy ny endrik'ireo loko ireo, ary tena ankasitrahan'ny trondro, ny biby fiompy ary ny biby mandady.
11. Maro ny mpanamboatra atody
Ny vehivavy BSF dia afaka mametraka atody eo amin'ny atody 185 - 1.230. Ireo atody ireo dia napetraka amin'ny indrindran'ny sakafo na ny fako fa tsy amin'ny sakafo.
Ny isan'ireo atody dia mitovy amin'ny habetsahan'ny fatin'olona BSF. Ny vehivavy BSF izay manana vatana lehibe sy elatra lehibe dia manana fironana ambony kokoa amin'ny atody raha ampitahaina amin'ny lalitra izay manana vatana sy elatra kely.
Rehefa afaka roa andro ka hatramin'ny efatra andro dia hihodinkodina ao amin'ny 1 maggot ny atody ary maniry ny manomboka amin'ny 6 mandritra ny roa ka hatramin'ny telo herinandro.
Any amin'ny toerana misy sakafo ampy sy hafanana eo anelanelan'ny 25-35 ° C. Ny haben'ny karazan-tsakafo vao haingana dia manodidina ny 2 mm, avy eo dia mitombo amin'ny 5 mm. ary rehefa avy niova ny hodiny dia nitombo ny 1,5-2 cm.
Ny Maggot BSF dia afaka mihinana izay rehetra fihinan'ny olona ary mety hanjavona haingana, fako ary sakafo.
Io fanao io dia mahatonga an'i Maggot BSF novokarin'ny olona maro eto amin'izao tontolo izao. Ny mahasoa iray hafa dia loharanon'ny sakafo sy ny haino aman-jery maimaim-poana ao amin'ny tontolo iainantsika ary azo omena maimaim-poana.
Ny fahafahana mahazo ny loharanom-pamokarana madinika dia mazava ho azy fa ireo tantsaha izay mampivelatra azy dia azo atao amin'ny vidiny ambany.
13. Tsy mila tany malalaka.
Ny famokarana kôkôsy indrindra indrindra fa ny trondro sy ny sakafom-biby dia tsy mitaky tany be loatra. Azontsika atao ny mampiasa ny efitrano fiara, ny lafiny sy ny efamira amin'ny trano miaraka amin'ny metatra 3x4 metatra voalohany.
Na dia efa mahomby aza ianao amin'ny fambolena fako BSF amin'izao fotoana izao, dia afaka mamboly azy ao an-trano ianao tahaka ny namana Yurie BSF ao an-tanànan'i Kebumen.
Ho an'ny mpamboly trondro, ny sakafon'ny vorona sy ny bsf maggot dia ampiasaina ho biby fiompy, ary amin'ny ankapobeny dia alaina ao anaty entana.
Ohatra amin'ny gnou
14. Mora sy mahomby
Ny famokarana BSF-maggot dia mora, ampy hahazoana fako na fako organika ao anaty fitoeran-drano ary mametraka izany any amin'ny faritra izay tsy voatery mivatravatra mivantana.
Afaka andro maromaro ny BSF dia azo alaina ary homena biby fiompy. Tena mahasoa ny fomba fisakafoanana.
Noho ny fitiavan-tanindrazana BSF amin'ny olon-dehibe, dia handao ny fampielezam-peo mahatsikaiky handeha any amin'ny toerana mangatsiaka sy maina (fanangon-tena) mba hisaintsaina sy hanova ny toeran'ny pupa alohan'ny hahatongavana any amin'ny fiaramanidina BSF olon-dehibe.
15. Loharanom-pahavelomana azo havaozina
Ny fahatakarana ankapobeny momba ny maggot dia loharano proteinina izay azo averina haingana haingana.
Ny famokarana maggot na fambolena maggot dia fomba iray ahazoana proteinina azo havaozina izay vokatry ny dingana famokarana mahazatra.
Midika izany fa ny BSF BSF sy Maggot lalitra dia misy amin'ny natiora mandritra ny fotoana lava be, ka tsy ilaina ny manakorontana sy manahy momba ny fitrandrahana harena.
Izany no mahatonga ireo tantsaha mpilalao marefo mamokatra magot ho loharanom-pahalalana ho an'ny trondro sy ny sakafom-biby.
Ny Maggot dia manana kalôria avo na loharanon-kery izay rehefa mihena ny biby dia mampitombo haingana ny trondro na ny sakafom-biby.
Satria ny asan'ny biby fiompy dia tohanan'ireo kaloria voangom-bolo avy amin'ny tsiranon'i BSF. Raha tsorina, ny kalôria dia angovo izay ilainy amin'ny vatan'ny trondro, ny biby fiompy sy ny biby mandady ary ny biby.
Mba hahafahana mandroso sy manatanteraka ny asany ara-batana araka ny tokony ho izy ny vatany dia manana fanoherana tsara amin'ny aretina.
Ohatra, ny kalorie dia mila sigara amin'ny ankapobeny lehibe toy ny 9,2 - 10,1% matavy mba hahafeno ireo filàna ireo dia azo avy amin'ny BSF maggot.
Maggot izay manana vatana matavy 29,65 (Fahmi et el, 2007). Saingy rehefa jerena avy amin'ny vanim-potoana, ny maggot dia manana tahirin-tsakafo samihafa.
Fitaovam-pahasalamana (BK) Coarse Protein (PK) Coarse Fat Coarse Ash
Mijery ny vontoatin'ny fatin-jiro izay ambony lavitra noho ny zavatra ilaina amin'ny trondro (ho an'ny biby hafa azafady mba hanamarina izany ka tsy ho tafahoatra amin'ny famokarana).
Tsara kokoa raha ampiasaina amin'ny pasta, lafarinina, poti-pako ary ny toy izany.
Ny fanodinana ireo zava-mahadomelina ireo ho fanomanana isan-karazany, ankoatra ny fisorohana ny fisotroan-dronono tsy misy ilana azy ary mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny biby fiompy. Fandaniana ihany koa izany.
17. Fandresena asa fitoriana
Ny famokarana biby ara-tsakafo isan-taona dia nitombo 6,2% -8,1% tao amin'ny famokarana 2018 an'ny biby fiompy dia nakatona tamin'ny fe-potoana 19,4 tapitrisa taonina.
Ny habetsahan'ny biby fiompy ilaina dia mahatonga ny famokarana maggot ho fotoana iray lehibe.
Ny tombony ho an'ireo mpamboly maggot dia ny hoe mora sy maimaim-poana izy ireo, eny fa na dia ny fitaterana aza, dia kely ihany koa izy ireo.
Raha oharina amin'ny famokarana biby, ireo zavatra fototra ilaina dia entina lafarinina sy ny vidiny avo lenta amin'ny famoahana ireo fitaovana ireo.
Amin'ny andaniny maro, ny tantsaha mpamboly dia afaka mandresy, fa mazava ho azy fa manome sakafo mora vidy sy kalitao, mila mianatra ny fomba hambolena ny kôkôsy mahitsy izy ireo mba hamokarana be dia be.
Ary tokony ho takatra hatramin'ny fiandohana izany, manomboka amin'ny fambolena maggot tsy misy fofona. Mba hahafahan'ny orinasan-tsakafo Maggot ho azo antoka sy azo antoka, tsy hohadinoin'ny fiarahamonina.
Ho an'ny fiandohana dia afaka miditra ireo fahafaha-manao ireo isika amin'ny ambaratonga kely na trano.
Ny fampitomboana ny fahalalana sy ny traikefa dia mahatonga antsika hatoky ny fivoaran'ny fandraharahana ho an'ny lehibe kokoa.
18. Toetoetran'ny indonezianina
Toetrandro mafana sy
Amin'ny rivodoza tropikaly any Indonezia, ny FLM (milomano mainty) no afaka miaina sy mamboly tsara.
Ny tombony amin'ity toetr'andro mafana ity dia ny mahatonga ny fizotry ny maoderina Magfot BSF tsy misy fofona:
Mamboly ny BSF Maggot amin'izao fotoana izao tsy misy fofona mora kokoa
Ny famolavolana maoderina BSF tsy misy fofona mora
Ny fambolena BSF Maggot tsy misy fofona dia mahasoa kokoa
Ny fambolena bsf amin'izao fotoana izao dia tsy mitombo ny vokatra haingana
Mamboly gidro tsy misy fofona maimbo
Ny toetr'andro tropikaly any Indonezia dia manampy ireo mpamboly hanamaivana ny enta-mavesatra entin'ny famokarana.
Raha ampitahaina amin'ny firenena hafa izay manana seza roa monja. Ny fanaovana volom-borona BSF dia mitaky vola an-jatony tapitrisa amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena sy ny tariby rehetra mba hiorenan'ny toetr'andro ao anaty amponga.
Raha tsy any Indonezia dia tsy ilaina izany satria ny toetr'andro any Indonezia dia miorina kokoa. Noho izany, ny fanaovana amponga miaraka amin'ny fampitahana 11-2, tsy mila mandany vola an-jatony tapitrisa ianao.
Any Indonezia dia manao ampongabendanitra BSF amin'ny vola Rp500.000-Rp600.000.
Mora kokoa ny fambolena
Ny famokarana maggot, iray amin'ireo antony tokony homanina dia ny harena voajanahary ho fitaovana fototra amin'ny fanaovana kôkôsy.
Tahaka ny fako voajanahary, ny fako, ny diky biby, sns ... Ny singa fototra rehetra dia mora mora. Mora ny mahazo fitaovana fototra mba hahatonga an'i Maggot tombontsoa fanampiny hanombohana raharaham-barotra mora.
Ary misy ireo fitaovana ireo amin'izao fotoana izao manerana ny manodidina antsika. Jereo fotsiny ny pilina fako eny an-tsena, eny an-dalambe sy eny am-baravarankely.
Tsy lazaina intsony fa ny hazo menaka, ny menaka palma izay natsipin'ny tompon-trano. Anisan'izany ny fako simika izay manaparitaka sy manelingelina ny tontolo manodidina.
Amin'ny fampiasana fitaovana maggot, mora kokoa ny fampiharana ny business maggot.
Manan-karena bebe kokoa ny fambolena tsiranoka tsy fahita
Ny vidin'ny fampiasam-bola voalohany sy ny mason'ny fahazoana fitaovana famokarana maggot dia mahatonga ny business maggot mahasoa.
Satria renivohitra kely ihany no afaka manomboka ary ny fahazoana mason-tsivana mora vidy dia mety hahatonga ny vidim-pamokarana sy ny fitohizan'ny orinasam-barotra ho mendri-kajika kokoa.
Ny fambolena voajanahary tsy mora simba no vokany
Ny firoboroboan'ny fako BSF any amin'ny toetr'andro dia haingana be raha oharina amin'ny firenena tsy tropika.
Ny Maggot BSf any amin'ny toetr'andro any tropika dia azo alaina amin'ny 18 isan'andro. Ary azo atao koa ny manangona maggots BSF raha vao herinandro fotsiny izy ireo.
Ny fotoana fohy amin'ny famokarana kôkôsy ao amin'ny toetr'andro dia manampy tokoa ny tantsaha amin'ny fanomezana sakafo haingana sy mora.
Amin'izay dia ilaina ny famokarana biby.
19. Ny fitazonana ny fahefana dia eny rehetra eny
Ny famokarana maggot, dia misy fitaovana sy fitaovana marobe izay tsy maintsy arahina toy ny baomba BSF, zezika BSF, zezika atody, biotong magnost enlargement etc.
Ny fanaovana bommers BSF dia tsy mila mampiasa fitaovana vaovao, Azonao atao ny manamboatra fitaovam-piadiana BSF avy amin'ny fitaovana fandefasana na fitaovana tsy ampiasaina toy ny hazo, metaly sy bamboo any an-trano.
Ny cages BSF dia natao ho toerana fialokalofana ho an'ny lalitra mba tsy hanidinany na aiza na aiza. Amin'ny fanomezana ny baikon'ny BSF, mazava ho azy fa afaka manitsy ny famokarana atody araka izay ilaina
Ny fitahirizana ho an'ny atody BSF dia mety amin'ny koveta, siny, gallons nampiasaina, panika sns. Ny atody atody izay alaina na voaangona avy amin'ny baomba BSf dia potika ao anatin'ireny entona ireny.
Izany dia arotsaka ao anaty fefy iray mba hahatonga azy ho voalamina kokoa ho toy ny efa androm-panafahan'ny vorona.
Azo atao toy ny kitay hazo, bamboo ary fitaovana fako hafa ny biriky atody BSF. Biotong ho toy ny boaty ho an'ny fanitarana ny maggot ao anatin'ny dingana taorian'ny fanotan-jaza ary avy eo nafindra tany amin'ny fampivoarana biotong.
Ny Biotong dia azo atao amin'ny rafitra fametahana rafitra toy ny fanamboamboarana tranom-borona. Mitandrema hatramin'ny 3 amin'ny 4 fametahana.
Amin'izany fomba izany, ny fambolena maggot dia afaka manamaivana ny tany tery ao amin'ny garazy na eo an-tokotanin'ny trano fanaovana fanatanjahan-tena.
Ny Biotong dia azo atao ihany koa amin'ny fitaovana simenina toy ny fanaovana dobo trondro saingy ny 30 cm amin'ny avo fotsiny.
20. Free brouwers BSF sy atody avy amin'ny natiora
Ny FL dia manerana an'i Indonezia. Ny fomba hanomezana ireo ambiny sisa tavela ao an-dakozia ao anaty fitoeran-jiro, ireo mpamboly BSF dia ho avy ary hametraka atody ao anaty tahiry izay nomena.
Ankoatra ny ambiny ao an-dakozia dia betsaka ny azo ampiasaina raha toa ka tafiditra ao anatin'ny sokajy organika ireo entana ireo ary tsy misy poizina na misy pesticides.
21. Mpiaro ny zokiolona sy ny tontolo iainana
Ny BSF dia manana feon-kery mahery izay manala ny lalitra sy lalitra maitso. Noho izany, amin'ny fampisehoana media izay efa nomaninay dia tsy hifangaro sy hifangaro amin'ny lalitra ary lalitra maitso.
Tena manan-danja tokoa izany mba hampivoarana ny toeram-pambolena mahavelona amin'ny lalamby mitondra aretina. Tsy misy fofona, tsy mampidi-doza ary mampiadana ho an'ireo izay mamboly na any amin'ny tontolo manodidina.
22. Maggot BSF dia naman'ny mpamboly mpamboly
Maggot mainty volon'ny Maggot dia mety hanamaivana ny E. coli 0157: H7 sy Salmonella enterica hita amin'ny dite akoho.
Mpiady haingam-pandehan'ny Maggot dia mamono haingana ny loto, siramamy organika sivy avy amin'ny fahalotoana amin'ny ora 24.
Ny miaramila miloko miondrika dia mampihena haingana ny habetsaky ny lanjany sy ny lanjany. Amin'ny alàlan'ny mpanjanaka larval dia manapotika ny sakafo izy ireo ary mamorona hafanana, mampitombo ny fatran'ny kompost.
Ny vola manan-danja dia niova fo koa ho an'ny gazy karbônika izay ateraky ny maggots sy ny mikrôgie / ny micro microismisme.
Ny lava ao amin'ny rafitra compost dia matetika mampihena ny volan'ny compost amin'ny manodidina ny 50%. Ary mety hahatratra ny 90% miaraka amin'ny fomba fambolena BSF Modern Without Bau miaraka amin'i Yurie BSF.
Fampielezana ny Lalitra BSF
Io karazany io dia niandoha avy amin'ny ecotone neotropical, saingy tato anatin'ny folo taona dia niparitaka nanerana ny kaontinanta rehetra izy, ary nanjary ho feno cosmopolitan.
Ao amin'ny ankamaroan'i Eoropa no ahitana ny BSF, anisan'izany ny Peninsula Iberiana, Frantsa Frantsa, Italia, Kroasia, Malta, ny Nosy Canary sy Soisa.
Ny BSF dia afaka hita ao amin'ny Afrotropic ekozon, ekozon Australasia, atsinanan'ny Palaearctic ecozon, Ecoson Nearctic, Afrika Avaratra ary Ekozon Indomalayan.
Ireo voromahery vavy dia mametraka atody eo anelanelan'ny 185-1.235 atody indray mandeha. Ireo atody ireo dia voatahiry ao anaty kiraro na eo ambony ety ambony na eo akaikin'ny fitaovana organika toy ny dongo na compost ary manaloka ao anatin'ny 2-4 andro.
Ny lavenona vao voahodina dia 0,04 santimetatra (1 mm) lava, afaka mahatratra ny 1 mm (27 mm) lava ary 0,10 mankany 0,22 g amin'ny faran'ny dingana lava.
Ny dingana lavareny dia maharitra mandritra ny andro 18-22, izay maharitra ny diaponan'ny prepupa amin'ny andro 7. Ny halavan'ny dingana lavareny dia azo atao amin'ny faharetana sy maharitra mandritra ny volana maromaro raha kely ny hafanana na tsy fisian'ny sakafo.
Ny dingan'ny cocoon dia maharitra hatramin'ny 1 ka hatramin'ny herinandro 2. Ny volon'ny olon-dehibe dia afaka miaina eo anelanelan'ny 5 - 8 andro raha omena tantely na siramamy java rehefa ny fahaterahana na ny zava-pisotro tena ankafiziny dia ny nectar any anaty ala.
Ny adult dia mivelona amin'ny tahiry matavy nangonina nandritra ny dingana lava.
Ny volon'ny BSF dia manana morphose lavorary amin'ny famerenana indray ny fisiany. Ny metamorphosis tonga lafatra dia ny fizotran'ny fiainana na ny fiainana andavanandron'ny biby izay niaina ny dingana 4 teo amin'ny fiainany.
Amin'ny andalana iray mandritra ny androm-piainana dia mandray eo anelanelan'ny 40-44 andro ny BSF. Ny vanim-potoana vanim-potoana dia miankina amin'ny toe-javatra toy ny faharetan'ny fiahiana sy ny sakafo.
Ny fiaramanidina BSF dia miavaka satria ny dingana 5 dia misy dingana maromaro kokoa amin'ny andavanandrom-piainany:
Adult / Imago
Ny dingan'ny adult fly na ny imago dia ny dingana taorian'ny fanesorana ny pupa ao amin'ny akorany. Ao anatin'izany dia tsy mihinana sy misotro mandritra ny androm-piainany ny fitrandrahana BSF.
Ny jiro BSF tanora izay vao avy nopotehina ary mivoaka avy ao anaty akorany ary ao anatin'ny ora 12 dia hanjary ho lasa lalitra ho an'ny olon-dehibe.
Ny lalitra vao hipoaka dia hivoaka avy ao amin'ny amboadia kokona ary hanidina sy hiverina hitady loharano ny hazavan'ny masoandro sy ny fisotroana.
Ny vanim-potoanan'ny bug dia efa fohy, izay misy eo anelanelan'ny 5-8 andro, io dia voakasik'ireo fototry ny toetr'andro, ny fefy sy ny loharanon'ny zava-pisotro.
Aorian'ny fiaramanidina matihanina BSF matanjaka dia hanangona na hanangona. Ny FLF dia manana fahafahana miasa amim-pahombiazana ary ao anatin'ny fotoana fohy ihany.
Ny fisotroan-toetran'ny BSF dia ny ando maraina sy ny voninkazo tantanana. Ao anaty tranom-bahiny iray dia afaka manome siramamy Java ho solon'ny tantely ihany koa.
Ataonao izany amin'ny fiparitahana ny rano mandritra ny baomba.
Amin'ny dingan'ny fanangonana na fanangonana dia hanatona ny vehivavy ilay reny lahy. Ao anatin'ny dingan'ny fanatrehana ny fiterahana vavy BSF dia atodika amin'ny sehatra maromaro ary maharitra.
Ny toerana misy ny fiaramanidina lahy dia manidina sy misandratra eo amin'ny vatan'ny vehivavy amin'ny voalohany, miatrika lalana iray ihany izy ireo, fa ao anatin'ny segondra vitsy dia mihemotra sy mifanohitra.
Ao anatin'ity vanim-potoan'ny fiaramanidina ity dia lasa singa iray izay mitana andraikitra lehibe ny hafanana. Ny hafanana tsara indrindra ho an'ny lalitra BSF dia amin'ny hafanan'ny 30 ° C.
Na dia tsy mila sakafo ny BSF mandritra ny androm-piainany, dia mbola tokony homena rano fisotro. Ny fitsaboana amin'ny fanomezana rano fisotro madio amin'ny endriny dia hampitombo ny famokarana atody.
Ny famokarana tantely na rano na rano jarosiana dia mampisy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny taonan'ny lalitra.
Ary azo jerena amin'ny isan'ny andro fanitarana ny fiainana an-jatony sy ny isan'ny andro fametrahana atody ho an'ny lalitra.
Taonan'ny Andro Fanitarana ny Lalitra
Ny andro 10-11 no andro lehibe indrindra amin'ny fahafatesan'ny BSF nomena tantely
Ny andro 5-8 no andro lehibe indrindra amin'ny fahafatesan'ny BSF nomena rano fisotro
Isan'ny andro hanaovana lay
Ny andron'ny 5 dia andro faratampon'ny fametrahana atody amin'ny lalitra izay nomena tantely
Ny andron'ny 7 dia andro faratampon'ny fametrahana atody amin'ny lalitra izay omena rano fisotro
Ny fotoana eo anelanelan'ny 10-30 minitra dia vehivavy BSF mba hametrahana ny atody. Miaraka amin'ny isa eo amin'ny 546-1.505.
Ny habetsaky ny atody BSF eo anelanelan'ny 16,2-18,9 mg sy ny lanjany isaky ny atody eo anelanelan'ny 0,027-0,032 mg. Ny fotoan'ny peak dia matetika mametraka atody eo amin'ny 11.00-15.00.
Vehivavy BSF mandositra mamoaka atody indray mandeha, ary maty ora maro taty aoriana.
Vehivavy vavy BSF bebe kokoa
Lehibe goavam-be BSF matetika mamokatra atody kokoa raha oharina amin'ny lalitra vavy izay kely kokoa.
Ny hery mitaona goavam-pirenenan'ny BSF dia mitranga eo amin'ny vondron'olona 55-60%.
Ny volon'ny olon-dehibe dia hifanambady sy oviposition amin'ny 24 ° C (75 ° F) mankany 40 ° C (104 ° F) na mihoatra. About 99,6% oviposition amin'ny saha dia mitranga ao amin'ny 27,5-37,5 ° C (81,5-99,5 ° F).
Efa nampiasaina tsara ny jiro tamin'ny jiro tamin'ny jiro. Amin'ny toe-tantely tropikaly dia ampy ny tara-masoandro mivantana amin'ny marainan'ny andro sy ny tolakandro dia handrisika ny BSF hifanambady sy hametraka atody.
Raha ny tara-pahazavana indraindray dia alohan'ny BSF alohan'ny aorianany.
Ny hafanana amin'ny 70% dia heverina ho tsara indrindra ho an'ny dingana rehetra amin'ny fiainany. Tsy ilaina ho an'ny voay ny substrat, fa ny substrate kosa dia heverina ho toy ny mpitsikilo ny fahamendrehana izay manakana ny fandosirana.
93% ny haavon'ny fiaramanidina rehefa mihazona ny hafanana amin'ny 70%.
Ny lanjan'ny mainty hoditra mena dia azo avy amin'ny olona. Larvae dia tena mahomby amin'ny fiovana proteinina, ahitana proteinina 56, manankarena kalzika sy asidra amino tanteraka.
Ao anatin'ny ora 432, ny 1 an'ny tafika mainty manidina dia manova ny proteinina 2,4 kg, izay midika fa mihoatra ny atin'ny 45.000 ao amin'ny 1 g ny atody. Noho izany dia afaka mitondra loharanom-pahalovana ho an'ny olombelona izy ireo.
Tsy mamokatra proteinina izy ireo, fa ny proteinina tsy levon'ny olona dia lasa sakafo fihinana.
Ny tsiron'ny maggot manitra dia mamatra kely toy ny ovy.
Ny dingan'ny atody dia ao anatin'ny 2 - 4 andro. Ny fahasamihafana amin'ny fotoana dia vokatry ny hafanana sy ny hamandoana manodidina ny tontolo iainana.
Amin'ny ankapobeny, ny vavy FLF vavy dia mametraka ny atodiny eo amin'ny toerana marefo sy miaraka amin'ny fitaovana ara-organika be dia be toy ny endriky ny fitiavana ny zanany rehefa manilaka ny zanany ny "tsy mahantra" sy ny mosarena.
Ohatra ireo toerana misy atody BSF napetraky ny ray aman-drenin'ny BSF
Toerana fanodinana fako
Ao amin'ny dingana atody, fiaramanidina BSF vavy dia hamokatra atody maro toy ny atody 185 - 1.235 na matetika antsoina hoe cluster.
Ny endriky ny atody BSF dia oval amin'ny halavan'ny 0,7mm, raha vao napetraka ilay ramatoa vavy, dia mazava ho azy ireo atody.
Ary dia mihodina moramora ny loko mavomavo. Mba hanavahana ny atody izay nokotihina na tsia, dia ny fomba hanamarinana na hijerena ny atody BSF.
Raha miova kely ny loko mena (orange) ary ny endriky ny endriky ny atody dia tsy milamina na tsy mendrika.
Noho izany dia afaka mahazo antoka isika fa ny atodia dia nokolokoloina ary nivadika ho larva na maggots na magots na uget-uget.
Ny fampidirana fitaovam-pako ho an'ny atody BSF dia mety ho fitaovana ara-organika toy ny fako, fako sy dongona.
Ny larva BSF dia ampiasaina betsaka mba hanamboatra compost na fanodinana ny fako ao anaty sakafo. Voangona ny ala voaangon-tsakafo, trondro, kisoa, androngo, sokatra, dragona be volombava ary alika mihitsy aza.
Ny larva BSF dia iray amin'ireo biby tena mahomby indrindra amin'ny famerenana ny sakafo ho biomass. Ankoatra ny famokarana proteinina, dia manondraka loharano hafa koa ny loharanom-baovao manan-danja antsoina hoe frass (kasgot / mampiasa maggot).
Kasgot dia vokatry ny voamaina sy tsy misy fofona izay azo ampiasaina amin'ny fofona organika. Ny larva BSF alohan'ny hidirana amin'ny laharam-pahamehana (prepupa) hatramin'ny enina ora.
(Ny fifanakalozan-kevitra ao anatin'io fampahalalana io dia tsotra amin'ny dingana telo mba hanamora ny fahatakarana sy hanamaivanana ny fampiharana ataonao).
Raha toa ka tsy mihinana ny lavanina intsony ny lavanila ary tsy mamela ny ao anatiny ao anatiny, ny ampahany amin'ny vavany dia mitodika any hooksika ampiasaina amin'ny fiakarana.
Fizarana faharoa sy fahaefatra
Amin'ity diarim-panafihana voalohany voalohany ity, dia hivezivezy manoloana ny loharanon-tsakafo ny larva kely. Ity dingana voalohany ao amin'ny Instar ity dia mila mafy tokoa ny sakafo ho toy ny zavatra ilaina amin'ny fivoarana.
Aorian'ny andro ofisialin'ny 1 - 2, ny fe-potoam-piasana voalohany dia havotsotra avy eo amin'ny hoditra ary miditra amin'ny dingana faharoa fanentanana.
Ao amin'ny ambaratonga faharoa, ny volom-borona ankehitriny dia manana habeny lehibe kokoa izay manodidina ny 4-5mm, miaraka amin'ny toetra mitovy amin'ny fizotry ny dingana voalohany saingy manana vava lehibe kokoa noho ny fizotry ny fananganana voalohany.
Jereo eo amin'ny ampahany amin'ny spiracle volo izay misy vongana kely. Ary ny handrava indray dia lasa ny fizarana fahaefatra fahatelo izay ho hita kokoa.
Dingana fahatelo III
Ao amin'ny dingana fahatelo fahatelo, ny lava dia eo anelanelan'ny 15mm na miankina kokoa noho ny sakafo nomena (misy).
Ny dingana fahatelo an-tsokosoko dia efa misy kisary ary mivezivezy mivezivezy mba hitady toerana mivaingana ary voaro amin'ny rotsakorana sy ny tara-pahazavana mivantana ary hivoatra ho pupa na cocoon.
Ny fandrindrana ny fanindrahindrana ny fandrindrana dia ampiasain'ny mpamboly matsiro mba hijinja ny vorpupa.
Fomba fanangona otrikaretina amin'ny famoahana toeram-ponenana biotong iray izay manana lalana manosika na afaka manome tohatra iray izay ahafahan'ny prepupa mitsangana avy amin'ny biotong ary latsaka ao amin'ny faritra fanangonana.
Ny hafanana tsara ho an'ny lanjany dia mitombo haingana dia 30 ° C.
Mpiady mahery fo ny Maggot mainty ary afaka manohitra ny toe-pahasalaman'ny rivotra sy avo kokoa noho ny kankana. Ny miaramila miloko miondrika dia afaka velona amin'ny ririnina.
Ary ilay miaramila mainty mivezivezy dia handositra lavitra raha be loatra ny mponina, ary ny hafanana tafahoatra dia entin'ny micro micro-organismes ao anaty fanariam-pako na ny komposta.
Ao amin'ny diplaoma prepupa, ny lanjany dia manana fatrana feno tanteraka ao amin'ny teboka matotra kokoa.
Amin'io dingany io dia maharitra mandritry ny andro 7 saingy misy fiantraikany ihany koa amin'ny hafanana amin'ny toerana tsirairay. Ny hafanana dia eo anelanelan'ny 26-33 ° C.
Ao amin'ny tetikasa fanomanana dia manodina mainty ny lavenon'ny lokon'ny vatana. Ny fanovana loko amin'ny lavanila ho mariky ny loko dia matotra ary vonona ny hiverina ho pupa na cocoon.
Ireo lava vavy vavy BSF amin'ny fitomboany dia eo amin'ny vodiny na lantotra lava kokoa noho ny lava lahy.
Vola fanampiny ho an'ny vavy lava
Ny lanjan'ny vavy dia mandanja kokoa raha ampitahaina amin'ny lavan-dehilahy. Ao amin'ny tetikasa prepupa ny lavaka fanariana vorpupa dia mamela ny media.
Mitadiava toerana iray izay arovana ny lohasaha amin'ny tara-masoandro mivantana sy ny orana.
Ny prepupa dialam dia mora mora hita amin'ny ravina ravina, vala volom-borona, vala ny diera biby, palma menaka solomaso sy ny sisa.
Natao izany mba hisorohana ireo mpihaza, toy ny akoho, trondro, vorona, kintana, alika, totozy sy ny sisa.
Ho an'ireny biby ireny (voromailala) dia manomboka toy ny henan'omby izay marefo sy avo amin'ny proteinina. Io fiomanana amin'ny fiainana andavanandro io dia antsoina hoe voa na zozoro.
Raha toa ka sarotra aminao ny manomana mialoha ny natiora. Ny hafainganam-pandaharana dia mividy amin'ny mpamboly majia.
Tsy mitovy ny kalitaon'ny Prepupa
Ny Maggot dia biby tsy manan-danja, izay midika hoe mihinana zavatra raha mbola ao anatin'ny sokajy organika.
Ny fanolorana sakafo na ny famokarana ho an'ny lavaka satria ny famokarana ho lasa prepupa dia misy fiantraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny vorona.
Ankoatra izany, ireo fiomanana ireo dia hampiasaina mba hahatonga ireo mpamboly hamboly indray.
Raha ny fanomezana omena dia tsy misy afa-tsy endrika fako na biby fiompy na fimam-bary, mazava ho azy ity karazana vorapota ity dia ho ambany kalitao toy ny fampidirana.
Io karazana prepupa io dia tsara raha ampiasaina ho fitaovana maggot. Tsy natao ho an'ny fanariana izay hampiasaina amin'ny fananganana indray.
Ny fametrahana ny sakafo tsy misy fotony sy tsy miorina dia hampihena ny tsy fahampian-tsakafo ary mety ho ampiasaina amin'ny lavarangana.
Ny mpamboly Maggot izay tsy mahatakatra ary manome sakafo mahavelona sy mivarotra izany ho toy ny mpanodina dia ho ratsy.
Izany tokoa no izy satria tsy azon'izy ireo. ary ny tanjona dia ny hampihenana ny fandaniana amin'ny fikarakarana mandra-pivarotana ny entana.
Fa ho an'ireo izay te hivoatra sy hikolokolo ny BSF, dia tsy vonona ny hanomboka ny fambolena mamboly amin'ny fividianana voanio tsy misy fotony.
Satria hividy indray ny zana-bola nividiananao azy. Ny fambolena mozika izay mifantoka amin'ny fivarotana vokatra avy amin'ny omby Maggot dia tsy maintsy mahatakatra ny fomba hambolena asa.
Satria ny Maggot no manana ny toetra "mitondra entana".
Inona no atao hoe Good Load?
Ny enta-mavesatra dia ny fizotran'ny biby mitsimoka sy manome sakafo mahavelona, ​​mba hanomezana ireo sakafo mahavelona ireo ho an'ny biby izay mety ho azy ireo.
Ity teny ity dia matetika ampiasaina amin'ny famolavolan'ny maggot izay ampiasaina ho toy ny faka ho an'ny fambolena.
Ny gidro izay amidy ara-barotra ho an'ny varotra biby dia tsy maintsy manana saram-pamokarana tanteraka.
Amin'ny fanomezana ireo lavan-tsakafo ambony kalitao talohan'ny nanaovana azy ao anaty broodstock, dia hanana toetra tsara toy ny tavy ny vorpupa. And.
Ny vokatra mahazatra dia matetika atao amin'ny fanomezana voankazo, legioma ary serealy na sakafo amam-bika izay feno sakafo.
Ny vokatra ara-barotra sasany dia azo ampiasaina ary manamafy indrindra ho an'ny entam-be toy ny triple M na Magic Media Maggot.
Ny vokatra Triple M na 3 M dia efa manana kôbhydrate, tazo, proteinina, vitamins, mineraly ary ny fibre fibre.
Ao amin'ny pupa na ny cocoon, dia ny dingana izay ny pupae tsara indrindra dia ny sakafo. Ny vavy pupa (cocoon) dia manelanelana ny 10% -15% mavesatra noho ny lehilahy.
Afaka tahirizina izy ireo mandritra ny herinandro mandritra ny herinandro, ary raha te-hanitatra ny fiainan'ny pupa ianao, dia afaka mitahiry azy ireo amin'ny hafanana 10-16 ° C.
Ny fomba hanentanana ny mofomamy na ny pupa dia mety homanina ao anaty fitoeran-javatra iray ary omena ny media ho bodofotsy.
Ity manaraka ity dia ny fampitahana ireo fitaovana dimy ampiasaina ho bodofotsy pupa. Tsy ampiasaina amin'ny vovo-dronono, fasika, vovoka manitra, sawdust.
Ny pupa amin'ny tany sy ny tsipika matevina dia haingana kokoa noho ny tany na ny pensée. Ny haingana haingana dia pupa izay tsy nomena bodofotsy (substrate)
Toby, tsara indrindra ny fiovan'ny toetrandro BSF eo anelanelan'ny 8-11 andro sy 29-30 ° C. Ny fivoaran'ny atody fara-fahakeliny amin'ny hafanana mihoatra ny 30 ° C.
Ny sakafo, ny habetsahana ary ny fampivoarana ny atody an-dranomasina dia misy fiantraikany be avy amin'ny hatsaran'ny fanomezana omena. Ny votoatin'ny sakafo fanampiny, ny lehibe kokoa ny BSF Lalt. And. Tsy mahavita manodinkodina ny valizy tsy ampy sakafo na ny vokatra mahazatra dia atody kely
Ny hazavana, ny hamafin'ny hazavana dia manan-danja amin'ny fivoaran'ny lalitra BSF. BSF dia tia toerana mahafinaritra
Ny Media, Media misy votoaty avo lenta dia mivantana mivantana amin'ny kalitaon'ny maggot. Ny haino aman-jery tsara indrindra toy ny triple M (maggot media magic), palm oil cake (PKM).
Lehilahy BSF Male sy BSF hafa
Lehibe ny vatana mangatsiaka
Lehilahin'ny elatra matevina
Ny lahy abdomen lahy 3 segondra, ary 6 amin'ny vehivavy
Ny lahy sy ny vavy dia malefaka sy malefaka
Ny lehilahy dia tsy manana firaisana ara-pananan'ny vehivavy
Ny olana momba ny harena voajanahary
Ny fahasarotana lehibe amin'ny fananganana ny fambolena BSF dia ny BAU. Tandremo ny fomba fambolena mahitsy sy mahitsy avy am-piandohana.
Raha fofona ny fambolena alika dia olana lehibe izany. Ankoatra ny tsy fahafaham-po noho ny fofona dia afaka manasa ireo mpihaza sy bibikely toy ny voalavo, lalitra maitso, kakazo, bibilava.
Ankoatra ny areti-maso, ny fandrahonana lehibe ho an'ny fambolena maggot dia ny fihetsiketseham-pianakaviana sy ny tontolo iainana. Maro ireo mpamboly tavy no voatery nanidy noho ny fofona vokatry ny toeram-pambolena.
2. Vokatra madinika
Ny olana goavana hafa dia ny fandaniana ambany amin'ny sehatra ary tsy azo antoka ny fahazoana maharitra.
Ny fihodinan'ny famokarana famokarana maggot dia mila manome lavenona na atody BSF izay mbola misy.
Ny vahaolana dia ny hananganana zanatany BSF amin'ny alàlan'ny natiora ho toy ny atody tsy tapaka amin'ny fanjonoana azy amin'ny fampiasana fitaovana toy ny biotong.
Ny mampatanjaka ny atody BSF dia afaka mampiasa karazan-tsarimihetsika, ravina maina vita amin'ny banana na biriky ao anaty boaty na fivarotam-boky na photocopies.
Ny fiaramanidina Black soldier dia afaka mitombo tsara mandritra ny taona any amin'ny toetr'andro any amin'ny faritra mafana na eran-tany, saingy any amin'ny toeran-tsekoly hafa, ilaina ny tavy mba ahazoana atody ao anatin'ny fotoana mafana.
Noho izany dia any Indonezia isika raha toa ka mamorona sy mazoto isika, tsy mila manahy momba ity olana ity isika.
3. Safidy tsy azo antoka
Diso amin'ny fisafidianana ny karazana fly sy maggot. Bibidia maitso maro no mamboly ala. Io dia tsy maintsy alamina avy hatrany.
Satria ny lalitra izay tokony hambolena dia avy amin'ny fiaramanidina mainty hoditra fa tsy lalitra maitso izay mitarika ny areti-mifindra.
Raha voatery mividy ambioka, hividy masom-boly ambonimbony BSF mba hahalavorary ny vokatra. Mividiana masom-borona ambony mandritra ny androm-piainana.
Raha mividy ambioka ianao dia tsy azo antoka ny valiny ary amin'ny farany dia tsy maintsy mividy sy mividy indray ianao.
Tsy i Bruce Lee isika
Aza mividy atody BSF izay amidy amin'ny grama. Mila mahafantatra ny atody BSF amidy iray isaky ny gram ianao dia midika fa mividy atody fongana ianao satria "voasikotra" avy amin'ny toerana niaviany.
Ny atodinan'ny BSF izay hokapaina dia ho tapaka. Noho izany dia mividy atody tsy mety ary tsy manilikilika.
Tsy lazaina intsony hoe rehefa manangona ireo atody ireo dia tsy mitandrina tsara izay mahatonga ny atin'ny BSF ho tapaka ary tsy hanilika.
Ny mpivarotra ny bsf kerok ny atody dia toa manam-pahaizana kokoa noho ilay Bruce Lee malaza izay afaka manadio ny atody tsy misy tapaka.
Ny vahaolana dia ny mividy atody BSF ho an'ny "cluster" izay mbola marefo toy ny toerana misy ny fantson-dranomandry mametraka ny atodiny.
Izany dia ny hiantohana fa ny atody dia tsy manan-kery ary tsy tapaka mba hividianana ny atody rehetra fa tsy ny atody totoina.
4. Ratsy ratsy
Ny fampiharana sakafo marina amin'ny tanjona hamonoana ny 83%.
Mba hahatratrarana izany, mila mianatra ny fomba fizahana ny tsindry ho trondro trondro sy voangom-bokatra izay ny raki-tsoa marina.
Aiza no tianao hivarotana ny kisoa kely rehefa vita ny sakafo ho anao? Aiza no tianao hovidinao?
Ny vahaolana amin'ity olana ity dia mora, mila fotsiny ny fampiroboroboana ny orinasa na trondro.
Saingy raha tsy azonao noho ny antony maromaro, dia tsy maintsy manomboka mieritreritra ianao hoe aiza no hivarotana ny kankana?
Ny vahaolana dia mora, mivarotra ny volonao amin'ny Yurie BSF, azonao amin'izao fotoana izao ny maggot amin'ny vidin'ny Rp7.000 isaky ny kilao.
Io vidiny io dia ambony lavitra noho ny tsena izay manodidina ny Rp4.000-Rp5.000 isaky ny kilao.
Yurie BSF dia mividy lafo be noho ny vidin'ny solosainao satria ilainareo izy io mba hozarina amin'ny sakafo ary zaraina amin'ny tanàna 99 ao Indonezia.
Raha liana amin'ny fampiharana mivantana ny fambolena mggot ao amin'ny tanànanao ianao, dia azonao atao ny manamarina ny adiresy ao amin'ity tranonkala ity na miantso mivantana an-dRamatoa Yurie amin'ny 0812-2105-2808.
6. Tsy mivoatra
Fampandrosoana ny orinasa maggot. Mazava ho azy, raha ny voalohany dia mieritreritra ny famokarana kôkôsy ianao.
Amin'ny voalohany, ny tanjona dia ny hampihenana ny fandaniana amin'ny sakafo. Rehefa mandeha ny fotoana dia hitombo ny fahaiza-manao ary hitombo hatrany koa ny fambolena.
Ho an'ny olona sasany, mazava ho azy, mila fanampiana izy ireo mba hitombo hatrany. Noho izany dia tonga i Yurie BSF miaraka amin'ny programa hanomezana fanampiana ho an'ireo namana Yurie BSF an'ny Rp100.000.000 isaky ny olona ary mazava ho azy fa mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa.
Ny fepetra takiana mba hahazoana io famatsiam-bola io dia ny tsy maintsy hivarotanao mivantana ny Yurie BSF. Io fanomezana io dia tsy maintsy averina amin'ny alàlan'ny fandefasana ny maggot-maggot ao amin'ny Yurie BSF.
Ny habetsaky ny refund dia tsy mahaliana mihitsy. Tsy manaiky ny RIBA isika. Na inona na inona ny lanjan'ny fanampiana omenay, dia tsy misy fanontana ara-panjakana.
Dia mandoa izany ihany koa ianao amin'ny Maggot.
7. Not directed
Ny mpiandraikitra mpitantana an-dalambe izay miantoka ny fambolena azy dia mahomby. Tena ilaina ny tari-dalana eny an-tsaha satria ny olana atrehanao isan'andro dia "mitovy" amin'ireo olan'ny tantsaha any an-toeran-kafa.
Ao no misy ny programan'ny DUTA YURIE BSF ao amin'ny toeram-pambolinao. Mitondrà fitarihana mivantana mifanaraka amin'ny toe-javatra sy ny toe-javatra.
Ho an'ity programa ambasadera Yurie BSF ity dia tsy ho irery ianao. MAHAIZA MALALA-TENA isika amin'ny alalan'ny lesona dia ny fankasitrahantsika kokoa ny fanampiana ny hafa dia tsy maintsy ho tonga ny fahombiazana.
8. Tsy misy mpitantana
Ny tianay holazaina dia ny tari-dàlana mandra-pahatongan'ny fambolena ny herin'ny maingoka izay tena mahomby.
An'arivony amin'ireo namana Yurie BSF hatramin'ny nahafantarany an'i 2007 dia mbola eo ambanin'ny Yurie BSF. TSY MISY ANTSIKA HO ANTSIKA.
Tsy fahaverezana ve izany?
Eny ary, ny fitsipika antsika dia miaraka amin'ny fahombiazana. Raha mahomby tokoa ny naman'i Yurie, dia hamidy any amin'ny Yurie BSF ny valin'ny maggot. Midika izany fa mila ny tsirairay isika.
Ahoana no ahafahanao manome ny sakafo hohanina ary ho lasa amin'ny tsena nasionaly? Ny sakafo ilaina amin'ny sakafo 2019 dia heverina fa mihoatra ny 20-21 tapitrisa taonina amin'ny sakafo. Hetsika ara-barotra tena goavana.
Ny orinasa Maggot Indoneziana dia avy amin'ny firenena Indoneziana, ho sehatra ofisialy ho an'ny fividianana sy fivarotana maggot ary fampandrosoana hafa.
Maggot sy Earthworm
Matetika ny tantsaha mpihinam-pako dia mahazo larva eo amin'ny toerana misy ny kankany. Larvae no tsara indrindra amin'ny famerenana "fandanindaniam-poana" amin'ny fikarakarana biby.
Ny kendrina dia tsara kokoa amin'ny famadihana fitaovana avo lenta (papyrus, carton, ravina, fitaovam-pambolena ankoatry ny hazo) ao anaty fanovana tsara.
Maniry tsara ny sisa tavela amin'ny ranon-tsavily ny valan-javamaniry, saingy misy ranon-tsiramamy misy ranon-tsiramamy ary manasitrana loatra ho an'ny kankana.
Ny fahavitrihan'i Larval dia afaka mitazona ny hafanana manodidina 37 ° C (100 ° F), raha mila kelikely kokoa ny kankana.
Ny ankamaroan'ny ezaka natao hampitombo ny isan'ny larva izay misy kankana ao anaty fitoeran-javatra iray, dia tsy nahomby koa.
Ny vazivazy dia afaka ho tafavoaka velona amin'ny fako rehefa ny tany no misy azy. Ny vazivazy dia afaka miaina ao anaty harona fako raha misy lanjany be dia be tsy misy.
Azo ampiasaina ny atidoha raha mihena ny isan'ny mponina (amin'ny ririnina) ary ny kankana dia afaka atsangana ao anaty sobika mangatsiaka ary miandry atody avy amin'ny lalitra mainty hoditra.
Amin'ny maha-sakafo azy ireo, ny larva BSF dia tsy fantatra ho mpampiantrano mpanelanelana ho an'ireo kankana kankana izay manindrona vorona, fa ny kankana maitso dia ho an'ny biby fiompy maro.
Ao Afrika Andrefana, ny Dirhinus giffardii dia hita fa parasitoid avy amin'ny pupa H. illucens ary mampihena ny famokarana atody.
Ny vokany dia ny fampihenana ny tahiry hatramin'ny 72%. Ireo parasita ireo dia entina amin'ny hadps ary ny fepetra fisorohana dia tsy maintsy atao mba hiarovana ny faritr'io fitomboana mihanaka io amin'ny fanafihan'ny hadp.
Ahoana no hambolena alikaola?
Misy fomba maro hambolena maggot. Ny haino aman-jery isan-karazany dia azo ampiasaina hamokarana angatra toy ny fako, fako sy dongona.
Ny fampahalalam-baovao rehetra ampiasaina dia misafidy media izay mora entina ary "maimaim-poana".
Tsy voatery hampiasa ny fampitam-baovao amin'ny fividianana toy ny fampiasana bran.
Ny fambolena ny haino aman-jery branâ, ankoatra ny kalitao vidin'ny kalitao, dia ambany ihany koa. Satria ambany ny votoaty mahavelona amin'ny tsiranoka.
Karazam-pahaizana momba ny harena an-kibon'ny tany
Fambolena ny biby fiompy rongony
Fiompiana biby fiompy
Ny fomba iray hambolena kôkôsy dia amin'ny fampiasana diky biby fiompy.
Ny fambolena amin'ny fambolena biby dia fomba tsara hamokarana be dia be amin'ny vidiny ambany.
Ny dite biby fiompy azo ampiasaina ho fitaovana ho an'ny fambolena maggot.
Amin'ny ankapobeny, ny dite rehetra dia mety ho ampiasaina amin'ny haino aman-jery fambolena. Noho izany, tsy misy antony tokony hividianana haino aman-jery fananganana volombava.
Ohatra amin'ny dongona ho an'ny haino aman-jery famokarana majgot
Ny fambolena môtô miaraka amin'ireo haino aman-jery avy amin'ny tofu, na ny fako amin'ny palmie, dia ankatoavina fatratra satria ankoatra ny famokarana kalitao tsara.
Ary koa ho vahaolana amin'ny fandotoana ny fako tofu izay natsipy tao anaty renirano.
Toy izany ihany koa ny fako misy menaka palmie izay tsy nampiasaina sy natsipy tao amin'ny faritra fambolena palm-osy. Na dia toy ny fomba famokarana solifara aza ny fototarin'ny menaka.
Ohatra momba ny fako amin'ny fampiroboroboana ny famokarana maggot
Ny fako organika dia olana ara-tontolo iainana amin'izao fotoana izao, ary miparitaka any amin'ny toerana rehetra. Mety ho fitaovana fambolena alikaola.
Ny fambolena mozika amin'ny fampahalalam-baovao mahamay dia tena atolotray satria ny vokatra dia tsara sy tsy an-kijanona manampy amin'ny famahana ny olana momba ny fako.
Ny olana amin'ny fako dia olana eran-tany, tsy ny any Indonezia ihany.
Lasa zavatra tena miavonavona izany raha iray amin'ireo ampahany kely isika hanampy amin'ny famahana ity olana amin'ny fako ity amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fako ireo amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fambolena fary.
Amin'ny famolavolana maggot farafaharatsiny dia hamokatra vokarin'ny vokatra amin'ny endriny
KasGot (maggot teo aloha) dia vovoka kely (tahaka ny fasika) avy amin'ny maggot ny haben'ny fanokafana analakely. KasGot dia avy amin'ny sakafo voajanahary izay nohanin'ny maggot ary natsipy tao amin'ny tandroka maggot.
Ity dingana ity dia antsoina hoe vermicomposting. Ny kalitao amin'ny boka dia tena miankina amin'ny lamin'ny fikojakojana ny maggot. Tsy miankina amin'ny karazan-tsakafo ara-biôlôjika ny kasgot.
Kasgot dia misy macro sy micro nutrents, ary vitaminina. Kasgot dia tsara tokoa ny fanatsarana ny alaina vokatry ny tany, ny fitomboana ary ny famokarana zavamaniry sy ravina.
Ny akondro Kasgot dia ahitana auxin izay miasa mba hamporisihana ny fitomboan'ny fakan-kazo. Ary vaovao tsara izany ho an'ny tantsaha satria hita fa mahomby kokoa amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny famokarana ravina sy voankazo.
Kasgot dia manan-karena amin'ny singa ao Hara
Ny Kasgot vokatra avy amin'ny dingana metabolika amin'ny vatana na ny vermicompost dia tena manankarena ny fiterahana ilaina amin'ny fahavokarana ny tany.
Kasgot dia ahitana sakafo mahavelona (macro sy chemistry simika). Ao amin'ny dingana kasgotoga, dia efa naharitra indroa ny fizotry ny diky ny organika.
Voalohany, ny dingana manan-danja amin'ny bakteria alohan'ny hisakafo. Faharoa, ny dingan'ny maggot tenany, izay rehefa ao anaty vavony no misy ny organika.
Izay avy eo dia mamotika amin'ny alalan'ny metabolika. Noho izany, ny maggot dia fantatra ho motera mora simba.
Ireo singa ara-tsimika ao anaty cassava dia vonona ny hionona amin'ny zavamaniry sy cassava izay ahitana mikraoba sy fitomboan'ny fitomboan'ny hormones, mba hahafahan'izy ireo manampy amin'ny fambolena haingana.
Ny isan'ny mikraoba be dia be ao amin'ny cassava dia manatsara ny famotsorana ireo sakafo ireo amin'ny endriny ilaina amin'ny zavamaniry.
Ampitahao amin'ny N, P, K POC KasGot (fampiasana alikaola)
3 Fikarakarana kolo 0,96 0,68 1,68
5 Mangetaheta akoho 2,72 6,32 2,03
6 Duck dropping 0,84 1,81 0,42
8 Pig maniry 1,24 1,83 0,74
Kasgot Organic Organic Content
Ny votoatin-tsakafo ao amin'ny maggot dia miankina amin'ny loharanom-pamokarana nomena ny maggot.
Ny fahasamihafana kokoa amin'ny sakafo, ny fahasamihafana kokoa amin'ireo singa ara-tsakafo ao kasgot. Saingy amin'ny ankapobeny, ny votoaty mahavelona amin'ny kasgôma dia toy izao manaraka izao:
41,23% ary ny fahafaha mamaha ny rano
13,88% humus asidra
Tombontsoa amin'ny fahavokarana Kasgot
Mora ny vidiny satria ireo ingredients izay manamboatra ny zezika kasgot dia fitaovana bitika manodidina antsika.
Tsy manimba ny tany ny tsy fahazoana akora simika. Izany dia mety ho azo ampiasaina tsy tapaka ary tsy miteraka vokatra ratsy eo amin'ny tany na zavamaniry.
Ny fahombiazan'ny zavamaniry dia tsy haingam-pandeha toy ny fanao amin'ny tsy fandrefesana. Satria ny mpanefy fanafody dia natao ho azy.
Manampy ny fitomboan'ny zavamaniry sy ny zavamaniry ho an'ny zavamaniry, legioma ary voankazo. Manampy amin'ny fanatsarana ny endriky ny zavamaniry ho hafahafa kokoa.
Ny loko volomparasy, ny tora-kofehy ary ny fihodina dia tsara kokoa. Kasgot dia tsara toy ny fifangaroan'ny fampahalalam-baovao mitombo ao amin'ny garderie.
Manana hormones hanatsarana ny vatana ara-batana, simika ary biolojika. Azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra satria tsy misy simika.
Dosage amin'ny fampiasana fanangon-jaza Kasgot
Kasgot mpanaingo ny vilany 1kg cassava mifangaro amin'ny tany 3kg, raha ho an'ny tany lehibe 6-10 kg cassava tsirairay 10m2
Ny habetsaky ny cassava dia miankina amin'ny karazana zavamaniry sy ny haavon'ny fahavokarana amin'ny tany mba hahazoana aina.
Ny tombony azo avy amin'ny fanafody bitika (POC) dia ny habeny azota, phosphorus, potassium ary rano ao anatiny, misy tsiranoka mivoatra ary afaka misoroka ny fahatongavan'ireo bibikely isan-karazany.
Ny natiora sy ny toetoetran'ny fanafody organika
Ny fanafody fanangonam-bolo maloto dia tokony ho fanampiny. Satria ny tranokala dia ho voatahiry mandritra ny fotoana maharitra any amin'ny fampahalalam-baovao, ampiasao kasgoma mafy.
Raha toa ny fikarakarana ny vongan-drano azo avy amin'ny solika dia mora kokoa amin'ny fanodinana ny rano ary mivoaka.
Fa misy tombontsoa miavaka amin'ny fampiasana ny POC maggot izay mora kokoa amin'ny famadihana ny ravina sy ny voankazo ary manampy amin'ny fitomboan'ny voankazo sy ny fitomboan'ny voa.
Indrindra indrindra rehefa manomboka mandoza ny ravina sy ny voankazo. Maggot POC dia tsara satria azo tsaboina mivantana amin'ny alalan'ny kibon-kibo na pores.
Ny fanomezana ny POC Maggot dia tsy maintsy mihaino tsara ny dosage mba tsy hitera-doza ary mahatonga fahafatesana amin'ny zavamaniry.
Ny zavamaniry amin'ny ankapobeny dia afaka mandray ireo sakafo mahavelona mihoatra ny 2% isan'andro.
Dosage amin'ny fampiasana ny POC Maggot
Ampio POC amin'ny rano madio. Taorian'ny fampifangaroana ny ranon-drano vaovao dia tsy mihoatra noho ny 2% na ny isa 1 litatra POC voadona amin'ny rano 100 rano.
Mirotsaka mandritra ny fiovan'ny toetr'andro avy amin'ny zavamaniry ka hatramin'ny taranaka izay mamokatra voankazo na voamaina.
Manomàna ny fitantanana ny POC maggot indray mandeha isan-kerinandro mandritra ny vanin-taona maina. Rehefa manomboka ny fotoana dia andramo daholo ny 3 indray mandeha isan'andro satria ny rano dia orana noho ny orana.
Ny dôzan'ny POC maggot dia tokony hanitsy ny karazana zavamaniry homena POC maggot.
Ny rendrarendra amin'ny endriky ny prepupa na largé dia tokony alaina amina fanomanana samihafa.
Izany dia ankoatra ny fanamafisana ny vokatra azo ihany koa dia azo arahina mandritra ny fotoana maharitra. Ary ampiasaina rehefa ilaina izany.
Azo ampiasaina amin'ny sakafo ve ny Maggot? Ny iray amin'ireo sakafo mahavelona ao amin'ny maggot dia proteinina,
Ary io proteinina io dia mila ny biby fiompy rehetra sy ny olombelona. Noho izany, inona no mety ho nomena biby. Ny valiny dia biby fiompy izay mila proteinina biby.
Fa ny karazana proteinina ilain'ny biby tsirairay dia tsy mitovy. Noho izany, ny vahaolana dia ny manara-maso ny kôpitaly ho amin'ny fiomanana samihafa aloha.
Iza amin'ireo proteinina no mifehy araka ny filan'ny biby fiompy.
Ny maggot dia tsara ho an'ny karazam-borona
Vorona mihira Cucak
Vorona mihiakiaka miala sasatra
Maggot dia tsara ho an'ny sakafo kafe Bangkok
Wido Chicken na Jalak
Maggot Tsara Ho An'ny Fitaovam-pananahana
Green Chicken Chicken
Hazo any anaty ala
Sri Lanka Chicken Chicken
Sakay Cotton (Silkie Hen)
Plymouth Chicken Chicken
Poul Poloney na Polonina
Maggot Tsara ho an'ny Feed Animal Feed
Adin-tsakafo tsara ho an'ny mpamatsy biby
Hikoriana ny Lakroa
Egyptian Fayoumi akoho
Ny maggot dia tsara ho an'ny karazan-tsakafo
Rock Plymouth Rock / Rock Barred
Maggot Tsara Ho an'ny Fikarakarana ny Catfish
Maggot dia tsara ho an'ny feedapapia
Fitrotroana tsara ho an'ny biby fiompy Cork
Maggot Tsara ho an'ny Duck Animal Feed
Tegal Lokom-bozaka eo an-toerana
Fiompiana omby vavy Mojosari
Maggot Tsara ho an'ny biby fihinanan-trondro
Maggot Tsara ho an'ny Arowana Animal Feed
Maggot Tsara ho an'ny Koi Animal Feed
Te hianatra hianatra
Mivantana amin'ny Ranch?
Hamarino ny toerana misy ny Ranch 99